ကိုယ်ပိုင်ဘဏ္ဍာ ရန်ပုံငွေစာရင်း ထားရှိမှုကို ရေးသားဖော်ပြရာတွင် အစိုးရ အဆက်ဆက်အပေါ် ထင်ယောင်?? - Yangon Media Group
ကိုယ်ပိုင်ဘဏ္ဍာ ရန်ပုံငွေစာရင်း ထားရှိမှုကို ရေးသားဖော်ပြရာတွင် အစိုးရ အဆက်ဆက်အပေါ် ထင်ယောင်??
ဝန်ကြီးဌာနအဖွဲ့အချို့ ကိုယ်ပိုင်ဘဏ္ဍာရန် ပုံငွေစာရင်းထားရှိမှုကို ရေးသားဖော် ပြရာတွင် အစိုးရအဆက်ဆက်အ ပေါ် ပြည်သူများထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေနိုင်သဖြင့် သတိပြုသင့်ကြောင်း စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းကပြောသည်။ ကိုယ်ပိုင်ဘဏ္ဍာငွေစာရင်းဆိုင်ရာ လွှတ်တော်အတွင်း ကိုယ်စားလှယ်အချို့ဆွေးနွေးခြင်း၊ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွင် ပျံ့နှံ့နေသည့် ကိုယ်ပိုင်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေစာရင်း သို့မဟုတ် OA စာရင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းက ဖေဖော်ဝါရီ၂၆ရက် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ် တော်အစည်းအဝေးတွင် ယင်းသို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
” OA စာရင်းများနဲ့ပတ်သက် ပြီးတော့ သေသေချာချာမသိဘဲပြောဆိုရေးသား ဖော်ပြခြင်းများသည် အစိုးရအဆက်ဆက်အပေါ်မှာ ပြည်သူကထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေနိုင်သဖြင့် သတိပြုသင့်ပါကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်”ဟု ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းကဆိုသည်။ နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ OA စာရင်းငွေများသည် ပုံမှန်ဘတ်ဂျက်လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖြတ်သန်းခြင်းမရှိဘဲလွတ်နေသည့် သဘောပြောဆိုရေးသားမှု၊ ဥဗစာရင်းငွေများကို ပြည်ပဘဏ်များတွင်ဖွင့်လှစ်ထားသည်ဟု ပြောဆိုရေးသားမှုများရှိခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းတို့မှာ မမှန်ကြောင်း ဒုဝန်ကြီးကပြောသည်။
”လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးထွန်းထွန်း ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့စကား လေးအတိုင်း ပြန်လည်ကိုးကားပြီး တင်ပြရမယ်ဆိုပါလျှင် မုဆိုးမအမေအိုရဲ့သားသမီးတွေဟာ ရွှေတွဲလဲ ငွေတွဲလဲမဟုတ်ပါဘူး။ သားသမီးများကို ဘယ်သူက ဘယ်လောက်ရှာထားတယ်။ အချိန်တန်လျှင်သူရှာတာ သူ့ကိုပြန်ပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ မိဘက မှတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိဘမှာလည်းအခြေအနေအရ သားသမီးများ ရှာဖွေတာကို မိသားစုအတွက် သုံးစရာရှိတာကိုသုံးနေရပါတယ်။ ဒါတောင်မှမလောက်ချင်ပါဘူး။ မိဘမှာလိုငွေပြနေပါတယ်။ ရှာနိုင်ဖွေနိုင်တဲ့သားသမီးတွေကို တတ်နိုင်သမျှ သူတို့ရှာတဲ့ငွေနဲ့ပြန်သုံးစေပြီးတော့ ပိုလျှံတဲ့ငွေကိုမရှာ နိုင်မဖွေနိုင်သော်လည်းဘဲ မိသားစုကို အကျိုးပြုနေတဲ့သားသမီးများအတွက် သုံးစွဲပေးရတဲ့အခြေအနေ ဖြစ်တာကြောင့်မို့ ပိုငွေလက်ကျန်များသည် သားသမီးများကပိုင်သော ငွေများမဟုတ်ဘဲ မိဘကသာပိုင် သော မိဘ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာ သာရှိသောစာရင်းအရ လက်ကျန်များသာဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်”ဟု ဒုဝန်ကြီးကဆိုသည်။
နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးအဖွဲ့ အစည်းများ၏ UFA, OA စာရင်းများကိုထိန်းကြောင်းခြင်း မရှိသေးဟုဆို ခြင်းမှာ မှန်ကန်ခြင်းမရှိကြောင်း၊ OA စာရင်းများသည် ပြည်ထောင်စုဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေထဲသို့သာ ဝင်ရောက်ပါကြောင်း၊ ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်၏ ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုကိုလည်းခံယူရပါကြောင်း၊ ပြည်တွင်းနိုင်ငံပိုင် ဘဏ် MEB တွင်သာ ဖွင့်လှစ်ထားပြီး ပြည်ပတွင်လည်း ဖွင့်လှစ်ထား ခြင်းမရှိပါကြောင်း ¤င်းကထပ်လောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင် ငံမြောက်ပိုင်းရှိ စက်ရုံတစ်ခုတွင် ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် နှစ်ဦးသေဆုံး၊ ၂၄ ဦး ဒဏ်ရ??
ဒုတိယအကြိမ်မန္တလာအိုးပင်းဖလား ဖိတ်ခေါ်ဘတ်စကက်ဘောပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည်
စာအုပ်၊ စာစောင်များနှင့် ဆက်နွှယ် ဝန်ဆောင်မှုအပေါ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုရန်
မြန်မာ-ထိုင်း နယ်စပ်ကိုဖြတ်ကျော်၍ ကန့်သတ်နယ်မြေသို့ သွားရောက်ခဲ့သည့် နိုင်ငံခြားသားနှစ်ဥ?